Zimbabwe Archives - Page 2 of 20 - Weekly Xposé
2018-11-02 2018-11-02 WeeklyTeam	Comment(0)
Zimbabwe clergyman apologises for HIV cure claims
HARARE, November 2 – Zimbabwe’s controversial Prophet Walter Magaya has on Thursday, retracted claims that he had found a cure for HIV amid intense political pressure. His claims were dismissed by the World Health Organisation, the United Nations and medical bodies in the country. At a press conference with Minister of Health Obadiah Moyo, Magaya […]
Zimbabwe’s MDC Alliance promises action against president Mnangagwa’s government
HARARE, October 28 – Zimbabwe’s opposition MDC Alliance president Nelson Chamisa on Saturday promised unspecified action against President Emmerson Mnangagwa’s government as his party prepares to “take back our electoral victory”. Addressing thousands of party faithful at a packed football stadium in Harare to celebrate the party’s 19th anniversary Chamisa said, “We won the elections […]
Mugabe son in law granted bail in kidnapping case
JOHANNESBURG, October 23 – The son in law of deposed Zimbabwe president Robert Mugabe was released on US$30 bail on Tuesday after he spent a night in police cells. Simba Chikore, who is married to Bona Mugabe, appeared in Harare Magistrate Court facing a charge of kidnapping involving a Zimbabwe Airways employee, Bertha Zakeyo. The complainant claims […]
Afreximbank throws Zimbabwe $500 mln lifeline
JOHANNESBURG, October 17 – The African Export-Import Bank (Afreximbank) said on Wednesday it had agreed to conclude a U.S.$500 million Nostro stabilization facility for Zimbabwe by the end of this month. An Afreximbank delegation led by its president, Prof. Benedict Oramah, held talks with a Zimbabwean team led by finance and economic development minister Prof. Mthuli Ncube, and […]
JOHANNESBURG, October 16 – The Zimbabwean government on Tuesday embarked on a charm offensive to woo investors in South Africa during the country’s “Zimbabwe is open for business” summit held in Johannesburg. Hosted by Zimbabwe’s embassy in South Africa, the summit attracted numerous government officials, diplomats, businesspeople, local and international media and some Zimbabweans based […]